Isayizi enkulu ye-alumina seal ceramic seal China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Faces > Isayizi enkulu ye-alumina seal ceramic seal
I-Model No.: JH.CDF.002
I-large size alumina seal seal isakhiwe ngama-95%, noma angu-99% alumina oxide ceramics. Ngalesi sibalo esincane sezinto ezibonakalayo, iphuzu eliphakeme lokuqhakazila, ubulukhuni obukhulu kakhulu, ukulwa nokulungisa, ukuqina kwamagesi / amanzi okungafani nezinhlamvu zokuzigcoba. Ihlala isetshenziselwa emetallurgical, mechanical, chemical, pharmaceutical, ukudla, izimpompo ezingamelana nokulimala, amadivaysi ezimoto ezinxenyeni zomshini.
Ukuze ama-devics abe nomoya ofanelekayo, ukuqina kwamanzi.Kubomvu, sizokwenza kahle ukugaya ukusebenza komsebenzi futhi senze kube flat flat kube 0.005mm flatness.
Sinikeza isevisi ye-prototyping, futhi ikhono eliphezulu lokukhiqiza ivolumu.